Qatar iyo Xulufada Sucuudiga keebaa u wanaagsan danaha Soomaaliya? – Xeernews24
Qatar iyo Xulufada Sucuudiga keebaa u wanaagsan danaha Soomaaliya?
17. August 2018 /in Qormooyin/Articles /von admin
Britain oo doonaysa inay bilawdo ‘bog cusub’ xiriirka dalalka Khaliijka
“Qudha 40 sano kadib xilligaas, taariikhda ayaa u muuqata in ay markale dib ugu laabanaysa halkii, balse markan waa ay kasii walwal badantahay” ayay daraasadda intaas ku dartay.
Tan koowaad waa in siyaasadda arrimaha dibedda lagu dhiso wax loogu yeedhay ‘dublamaasiyadda ganacsiga’ taas oo ah in go’aamada lagu saleeyo hadba danaha ganacsi ee Soomaaliya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/faalo-gaaban-230x130.jpg 130 230 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-17 19:15:112018-08-17 19:15:11Qatar iyo Xulufada Sucuudiga keebaa u wanaagsan danaha Soomaaliya?
Faaqidaad ku saabsan Cabdi Iley ka bacdi iyo Kililka5aad. Shirkada DP World oo damaceega banaanka soo dhigtay iyo qorshooyinkeeda mustaqbalka...